Tsvaga kuti ungave sei neyakareba nzara polish | Bezzia
Yakasimba nzara polish
Susana Garcia | | Runako, Runako manomano, Misumari
Iva Yakareba-inogara nzara polish kurota kweanoda manicure. Kwete chete iwe unofanirwa kuziva maitiro ekugadzira manicure, asi zvakare une yakanaka mbishi zvinhu uye zvakanakisa zvekuzora kuti chipikiri cheplishi chigare kwenguva refu. Saka iwe unogona kupfeka zvipikiri zvakaringana kwenguva yakareba pasina kuibata kana kunetsekana nezve machipisi ayo anoonekwa nguva nenguva.
Tora yakasimba polar chipikiri inogoneka, kunyanya kana isu tikasarudza enamel yedu zvakanaka uye tichiziva kuishandisa. Tichaona mamwe manomano kuitira kuti zvipikiri zvirambe zvakakwana kwenguva yakareba, tichidzivirira mabhureki ayo anoita kuti manicure iratidzike kunyangwe iri yezuro.
2 Nyorera yekutanga
3 Nzira yekupenda zvipikiri
4 Shandisa jasi repamusoro
5 Sarudza iyo enamel zvakanaka
Izvo zvakakosha kuti pakati peiyo enamel uye enamel isu tinokwanisa kugadzira a zorora kuitira kuti zvipikiri zvipore uye kuti zvisatsemuka, chinhu chakakoshawo chaizvo, zvikasadaro mapolish ese ari munyika anozoita kuti tive nembambo dzakanaka. Pakati nepolish uye polish unogona kumirira kwemazuva mashoma, kuti zvipikiri zvipore. Shandisa mafuta omuorivhi kuti uvafukidze zvakare uye kuti arambe akasimba, sezvo mafuta achipa mavitamini. Ukaita izvi unogara uine nzara dzakasimba dzisingatsemuke kana kuumbika.
Para kuchengeta nekurapa zvipikiri zvakanaka kuti tinoshandisa primer pamberi peyakajairika polish izvo zviri kusimbisawo. Rudzi urwu rwehwaro rinotibatsira kuchengetedza chipikiri uye kugadzirisa enamel iyo yatinoisa inotevera. Iyo yekutanga inotibatsirawo kuitira kuti zvipikiri zvisatore mavara asinganzwisisike, nekuti kana ari mapfumo anoguma achitora matoni kana yero nekuda kwekuita kwema enamel, zvinoenderana nemhando yeiyi uye nemhando yezvipikiri zvedu.
Nzira yekupenda zvipikiri
Chimwe chezvinhu iwe chaunofanirwa kuziva ndechekuti ndizvo zvakanaka kuzora mapasa maviri kuzvipikiri, asi idzi dzinofanira kunge dzakaonda. Ndokunge, zviri nani kuisa iyo enamel kaviri nechigadzirwa chidiki pane kamwe pamwe nezvakawanda, nekuti nezvakawanda chigadzirwa zvinotora nguva kuti zviome uye zvinotyoka zvisati zvaitika, zvinonyanya kunetsekana nekukwizwa uye kutyora. Chekupedzisira, iwe unogona kuwedzera yepamusoro jasi enamel layer nekuti zvakare zvinobatsira kupa zvishoma kupenya uye kugadzirisa kupera. Matanho acho ari nyore uye ndosaka uchifanira kufungidzirwa kuti iwe unofanirwa kuwedzera zvishoma enamel mune yega yekupfuura uye woibvumira kuti iome zvachose pakati pekupfuura.
Shandisa jasi repamusoro
Kana iwe ukaona kuti yako nzara dzinorasikirwa nekupenya kana dzinogona kukuvara, iwe unogona kuita chimwe chinhu chiri nyore kwazvo kuti vagare vakakwana kwemamwe mashoma mazuva. Iwe unogona kuisa imwe yakatetepa nhete yejasi repamusoro pamusoro pavo. Vachaunza vara racho kuti ripenye uye nekuvadzivirira zvishoma. Iyo iri nyore nzira yekuita kuti iyo polish igare kwenguva yakareba mukati memazuva ese kudzivirira kuti ubvise zvipikiri zvakare.
Sarudza iyo enamel zvakanaka
Chimwe chezvinhu zvakakosha kuti iyo enamel igare yakasimba ndeyekuti yakanaka mhando enamel. Yakachipa nzara polish inogona kutaridzika zvakanaka mazuva ekutanga asi ivo vanotyora nekukurumidza uye zvakare vanowanzo kurasikirwa nekupenya kwavo. Saka nzara dzinoita sedzakakanganisika mumazuva mashoma, izvo zvinoita kuti isu tigadzirezve. Iyo yakanaka ndeye kutenga yemhando yepamusoro nzara kana zvakare gel polish, sezvo izvi zvinopedzisira kwemavhiki zvakamira. Aya mapolishi akasimba uye anogara kwenguva refu pazvipikiri zvedu. Iko mari inozotibvumidza kunakidzwa nezvipikiri zvakakwana kwenguva yakareba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Yakasimba nzara polish
Yakabikwa mbatatisi uye quinoa saladi ine michero uye yogati